जय हो लकडाउन! :: जुना श्रेष्ठ :: Setopati
'जय हो लकडाउन' गीतको दृश्य
'जय हो लकडाउन!'
यो लकडाउन मन परेर कसैले लगाएको नारा होइन। लकडाउनबाट सास्ती पाएर फुरेको भोजपुरी गीत हो। कोरोना महामारी र लकडाउनले निम्त्याएको समस्या सम्बोधन गरेको यो गीतले विशेषगरी टिकटकमा चर्चा बटुलेको छ।
सुनसान भइल सब टाउन...
सिंगो सहर सुनसान भएको छ....
'जय हो लकडाउन' धेरैहदसम्म यस्तै गीत बन्न सफल छ।
'वीरगञ्जको स्थानीय परिवेशका कलाकार भए दर्शकलाई यथार्थपरक लाग्छ भन्ने हो। त्यसैले यहीँका कलाकारलाई प्राथमिकता दियौं,' भिडिओका सिनेमाटोग्राफर समेत रहेका विकासले सेतोपाटीसँग भने।
अनि गायक चन्दन प्रजापतीको स्वरमा उनीहरू भन्न थाल्छन्- किने खातिर रासन बजार गइनी...जय हो लकडाउन!
'गीतको मुख्य विषयवस्तु कोरोना भाइरस र लकडाउन नै हो। सामाजिक विषय मात्र नभइ गीतमार्फत हामीले सरोकारवालाको ध्यान पनि तान्न खोजेका छौं,' विकास भन्छन्, 'शब्द मात्र सुन्दा खरो लाग्ला। तर संगीत र भिडिओले गर्दा यो गीत मनोरञ्जन दिने खालको बनेको छ।'
'हामीले सल्लाह गरेर गीत तयार गर्‍यौं अनि निर्देशनका लागि विकास प्रजापतिलाई भन्यौं,' गायक चन्दनले सेतोपाटीसँग भने, 'निर्देशनका लागि तयार भएलगत्तै सुटिङमा गयौं।'
'सुटिङक्रम कतिपय ठाउँमा अनुमति थिएन। त्यही भएर जतिसक्दो चाँडो सुटिङ सकायौं,' उनले भने, 'हतार भएकै कारण प्रायः सिन एक-दुई टेकमै फाइनल गरेका हौं।'
गीतकार बलराम मिश्रले शब्द तयार पारेपछि स्वरका लागि उनले चन्दनलाई भनेका थिए। सुरूमा त चन्दनलाई 'यो गीत गाउने र!' जस्तो पनि भयो रे। तर पछि यसको शब्द आफैंलाई राम्रो लागेको बताउँछन्। यसमा संगीत विवेक परियारले दिएका छन्।
'सामाजिक विषय र परिस्थितिबारे आवाज उठाउने खालको शब्द थियो। भोजपुरी गीतहरू अश्लील हुन्छन् भन्ने दर्शकका लागि समेत यो नौलो ढंगको गीत थियो। त्यसैले रेकर्डिङका लागि तयार भएँ,' उनले भने।
'लकडाउनमा समेत प्रहरीहरू हाम्रो सुरक्षाका लागि दिन-रात बाहिर खटे। हामीलाई घरभित्र बस्न भन्दै आफूहरु बाहिरी दुनियाँसँग सम्पर्कमा रहे,' गायक चन्दन भन्छन्, 'जस्तो नजरबाट हेर्‍यो, त्यस्तै हुने हो। हामीले प्रहरीलाई सकारात्मक नजरले हेर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौं।'
'नारायण डान्स एकेडेमी' सञ्चालक एवम् कोरियोग्राफर राजन गिरीको कोरियोग्राफमा कलाकारहरूको नृत्य पनि भिडिओ सुहाउँदो र रमाइलो छ।
'जय हो लकडाउन' गीत असोज २ गते निर्देशक विकासको आधिकारिक युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको हो। भिडिओले हालसम्म १ लाखभन्दा बढी भ्यूज पाइसकेको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २०, २०७७, २०:३९:००
विक्की र कट्रिनाको संगीत समारोहमा काटियो चारलाख भारु बढी पर्ने केक